5 Workout Pfeka Mazano - Maitiro Akanaka
musha » Blog » 5 Workout Pfeka Mazano
Hazvina mhosva kuti wakave wakashanda kwenguva yakareba sei, munhu wese ane mazuva apo iye asingadi kunzwa kuenda kumitambo. Pamazuva akadaro, zviri nyore kugara pamubhedha uye kurova bhodhi snooze pane alamu. Zvisinei, unogona kuzvikurudzira kuti uchengetedze kushanda kunze kuburikidza nokutenga goroji rakakodzera yekugadzirira.
Ndiani anovenga bhandi shangu idzva? Kana iwe uchida kufemerwa, unoda kuwedzera maratidziro maviri emasviki kuenda kumajini ako. Kana zvichibvira, iwe unofanirwa kusarudza peji inofanana neyese yekuzvidzivirira kwako. Paunoita izvi, iwe unotanga kunzwa zvakanaka pamusoro pako uye uve akagadzirira kurova gym chinhu chokutanga mangwanani.
Kana iwe uchida shangu dzinopenya, ungatotanga kupfekedza kunze kwekurovedza muviri. Unoda here rubatsiro pakutsvaga vaviri vakarurama? Unofanirwa kurova nzvimbo yako yekutengesa zvinhu zvekugara uye kukumbira rubatsiro kubva kune umwe wevashandi vayo. Imwe yevashandi ichakubatsira kuti uwane hukama hwakanaka huchafananidza netsoka dzako nekugadzirisa.
Kana iwe usingakwanisi kuwana ruvara rwako rwekusarudza, unofanira kutarisa paIndaneti. Iwe unofanirwa kuchenjerera kana uchitenga shangu paIndaneti kuti urege kutenga unhu husina kunaka. Iva nechokwadi chekuti unotarisa hukuru hwemasati nokuti haasi ose akafanana.
Iwe unofanirwa kutenga mari mumishonga yekushanda iwe unogona kupfeka kunze kwekurovedza muviri. Paunenge uchipfeka kusuruvara kwakanyorova, iwe unonzwa sokunge iwe uri kuputirwa mumabhawendefa akareruka. Kana iwe uchida kuparadza nguva paunenge uchishandura zvekurovedza muviri, iwe unofunga kufunga kupfekedza kusvetwa kwako kushanda nokuti nzvimbo dzebasa rekushanda dzinenge dzisina kuoma.
Kana iwe ukapfeka kutuka kuti uite basa, haufaniri kupedza maminitsi gumi uchichinja usati warova gym. Uyezve, kupfeka zvipfeko zvako zvekushanda kunze kwekurovedza muviri kunokubvumira kuti uende wakasununguka zuva rese. Paunenge uchipfekedza zvipfeko zvakanaka, iwe unonzwa ufuridzirwa kuti utange matanho pane kufamba.
Vachionga kuvandudzika kwavo, leggings vakapedza kudzidza kubva kumapfekete ekupfekedza kusvika mune zvemafashoni. Paunenge uchitengesa, uchasangana nemashizha anokanganwira zvikuru, maitiro akakura, marefu eistbands, uye micheka yakanaka. Kana mamiriro ekunze asina kunaka uye akareruka, iwe unogona kupa mavara maviri akajeka kuti akure.
Kana iwe uri kutengesa mapeji epainings online, unoda kuziva yako chaiyo zviyero. Somuenzaniso, kana uri kutenga bespoke leggings akadai tsika leggings neMoveU, iwe unofanirwa kupa zviyero zvako chaiyo.
Iwe unogona kuratidzira rutivi rwako rwemutambo nekupfeka denga rakasvibirira kuenda kumitambo. Kuita izvi kunogona kuita kuti zvishomanana zviitike uye kukurudzira vamwe vanoita zvekuita gym kuti vatange kukurukura. Iva nechokwadi chokuti iwe unosarudza chirevo chinotaura newe uye chinoratidza manzwiro ako. Iwe unogona kutenga zvigaro zvakadaro kubva pachigadziro kana kuti zvive zvakakonzerwa zvikuru iwe.
Iwe unofanirwa kusarudza shanduro yakasiyana inokubvumira kuti uite zvinhu zvako uye unokodzera unhu hwako. Kana iwe unogona kubuda uchiseka pose paunobata zvishoma zvepamusoro wako mugirazi, iwe uchakwanisa kusimudzira mweya wako.
Kudzvinya masokisi anokwira kumabvi kuchawedzera kupararira mumakumbo ako uye kuita kuti iwe uone zvakanaka. Uyezve, zvakakosha pakudzivirira varicose mitsemhere uye inogona kuvandudza kushanda kwako mune zvekurovedza. Kushandiswa kwemasokisi kunodzivirira kuunganidza kwemvura mumisumbu yako yemasumbu, izvo chaizvoizvo chiri chinhu chakanaka kuongorora nzira yemasumbu inokura shure kwekudzidzira.
Kana iwe uri kushamisika kana kupfeka zvidzitiro kana leggings kumitambo yekuzvidzivirira, kupa mimwe masikisi ekuderedza kuchaita kuti chisarudzo chako chive nyore. Kana iwe uchigara uri pamakumbo ako paunenge uri kubasa, unofanira kufungidzira kupfekedza mabheji ako ekugadzirisa kushanda. Nenzira iyi, iwe uchange uine ivo kwenguva yakareba, zvichireva kuti iwe uchakohwa zvakanyanya.
Basa rakasvibiswa, rinofadza, uye rinonakidza workout gear richakubvumira iwe kusvika pamagariro ako ekufananidzira pasina nguva. Uyezve, iwe uchanzwa zviri nani pamusoro pako, izvo zvinoreva kuti iwe uchava munzira yako yekuva nemafambiro akanaka.